Mpanamboatra seza tsara indrindra sy orinasa | Media
Ny MEDO dia mamorona seza accent marobe sy mahasoa. Manavao hatrany ny angoninay izahay mba hifanaraka amin'ny tsenanareo. Miaraka amin'ny asa tanana miavaka sy ny fizotran'ny fanaraha-maso kalitao, manome anao vokatra tsara izahay izay hanampy anao hanangana ny marikao.
Ireto misy seza azo itokisana izay manome anao famolavolana fironana amin'ny fitaovana isan-karazany ao anatin'izany ny hazo sy ny hoditra, ny vy sy ny hoditra.
Ny seza fisakafoanana maoderina sy ankehitriny novokarin'i MEDO dia azo ampiarahina amin'ny endrika latabatra fisakafoanana samihafa. Mora ho anao ny manolotra sakafo fisakafoanana feno ho an'ny mpanjifanao.
Toetra vaovao an-trano
Ny filozofia famolavolana anay
Zavakanto minimalista italiana
Manasongadina ny hatsarana rehefa mandinika bebe kokoa ny fampiononana
Misafidy ny hoditra tena sosona voalohany
Ny tongotra vy amin'ny karbaona dia mirakitra haitraitra sy fahamendrehana maivana
Fampifangaroana tanteraka ny fampiononana, ny zavakanto ary ny lanja!
"Minimalista" dia fironana
Fiainana kely indrindra, Toerana farafahakeliny, trano faran'izay kely ......
"Minimalista" dia miseho amin'ny indostria sy fomba fiaina bebe kokoa
Ny fanaka MEDO minimalist dia manaisotra ireo fiasa tsy ilaina rehetra sy ny làlan'ny vokatra miverimberina, hananganana tontolo voajanahary, tsotra ary miala sasatra.
Ny sainao sy ny vatanao dia halefa amin'ny faran'ny farany.
Mamorona seza fialam-boly mahafinaritra
Ny seza hoditra misy seza fialam-boly vy amin'ny karbaona misy endriny misy elatra izay mamihina ilay seza misy tànana miavaka ao anatiny amin'ny alàlan'ny fahalemen'ny seza sy ny backrest.
Seza fialam-boly vita amin'ny vy
Ny fotony dia vita amin'ny vy sy ny sezan'ny seza miaraka amina gose midina miaraka amina fampidirana ao anaty fo tadidy.
Eo ambanin'ny sombin-javatra avo lenta dia metaly iray manontolo.
Ny fehin-tànana misy hoditra dia mitondra fahatsapana tsara ho antsika.
Seza kely fialan-tsasatra kely ho an'ny efitrano fandriana
Ny hoditra sy ny sezan-tànana dia famolavolana malama. Akaiky ny lokon'ny natiora izany. Ny seza sy ny lamosina dia voaravaka borosy malefaka amin'ny hoditra microfiber. Ny hoditra microfiber dia malama sy mateza. Raha jerena amin'ny fomba fijery akaiky dia lalina sy voajanahary ny firafitry ny seza.
Seza fialam-boly ahazoana aina
Seza miloko manga. Mety amin'ny efitrano fianarana sy faritra fialamboly izy io. Mampiasa hoditra feno ity seza ity. Ny fehin-tànana sy ny sandry dia mamehy ny vatana manontolo ao anatiny. Misy ondana kely manohitra ny lohan-doha, izay mahatonga ny seza tanana tsy monotonous intsony. Rehefa reraka ianao dia afaka miala sasatra amin'ny seza fialam-boly.
Ny seza fisakafoanana vita amin'ny hoditra malefaka
Ny backrest amin'ny polyurethane rafitra dia mifono amin'ny afo-mahatohitra. Ny sandan'ny lamosina sy ny seza amin'ny fibre mahatohitra hafanana mifamatotra hafanana.
Fitaovana: hoditra microfiber.
Ny tongotra fisakafoana dia vita amin'ny vy vy.
Seza fisakafoanana maoderina
Fitaovana fanao minimalism ananan'ny tendrony sy ny tongotra. Ny hoditra fanampiny dia ny volavolan-damosina sy ny tongotra ary ny fitaovana: hazo + hoditra lasely premium miaraka amin'ny tongotra fisakafoanana: hazo mafy.
Seza fisakafoanana misakafo
Ahosotra tanteraka amin'ny lamba na amin'ny hoditra ary ny seza dia mitafy hoditra, ny fofon-tsoavaly vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny backrest sy tongotra.
Hoditra fanampiny, seza amin'ny lamba; lamba fisorohana ny lamosin'ny lamosina sy ny tongotra.
Fitaovana: hoditra microfiber + lamba.
Seza famakiana mampahazo aina
Fipetrahana amin'ny trondro miaraka amina webbing elastika vita amin'ny elastika avo lenta, mifono amin'ny busaitra polyurethane mirehitra. Ny seza sy ny lamosina avy eo dia rakotra fofon-kofehy mifono hafanana mifamatotra hafanana.
Ny tongotra misakafo dia vita amin'ny vy vy.
MEDO Minimalism Luxury Leisure Armourair mpanamboatra
Ny famoronana seza fialamboly lafo vidy dia manam-pahaizana amin'ny fanaovana izay ho tian'ny mpanjifanao. Na mifantoka amin'ny fampiononana amin'ny sezakarana mihaja ergonomika na manasongadina kalitao miaraka amin'ny fitaovana avo lenta sy ny endriny, ny sezak'izy ireo fialan-tsasatra ankafizinay dia mifanaraka amin'ny volavolanao.
Fitaovana metaly seza misy seza misy seza.
Ny fotony dia vita amin'ny vy. Misy vy 2tsy vy eo anelanelan'ny ambanin'ny sandry roa. Ao ambadiky ny backrest sy aloha mankany amin'ny sezan'ny seza dia misy vy ihany koa hanohanana. Mavesatra sy mahery ny fotony. Ny holster dia ny tena hoditra manafatra miloko volondavenona. Eo ambanin'ny sombin-javatra avo lenta dia metaly iray manontolo. Ny fehin-tànana misy hoditra dia mitondra fahatsapana tsara ho antsika.
Masoandro hariva, mipetraha amin'ny seza fialam-boly mitazona boky, asio kafe amerikana kaopy eo amin'ny latabatra kely, ary avy eo mankafy fety mahafinaritra iray. Seza kely fialamboly kely ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny no manavao ny fahatsapana fa mipetraka izahay, tsara kokoa aza miaraka amin'ireo fitaovana miloko mainty miloko basy, napetraka tao amin'ny efitrano fandriana. Tena tsara ho an'ny efitrano fatoriana izany.
Ny seza misy fialan-tsasatra ho an'ny habaka kely dia mampiasa refy volamena telozoro, ary metaly mavesatra, azo antoka tsara ny endriny eo ambany. Ny cushions sy ny backrests dia voaharo miaraka. Ny rongony vita amin'ny landy vita amin'ny landy dia toa milamina kokoa. Mametraha ondana amin'ny seza dia mivoaha, mahazo aina kokoa izy. Ny tena zava-dehibe dia mamonjy habaka izy io.
Mpanamboatra seza fisakafoanana MEDO Minimalism
Mitady seza fisakafoanana ve ianao? Ity misy loharanom-baovao azo antoka izay manome anao famolavolana fironana amin'ny fitaovana isan-karazany ao anatin'izany ny hazo sy ny hoditra, ny vy sy ny hoditra.
Ny seza fisakafoanana maoderina novokarin'i MEDO dia azo ampiarahina amin'ny endrika latabatra fisakafoanana samihafa. Mora ho anao ny manolotra sakafo fisakafoanana feno ho an'ny mpanjifanao.
Amin'ny maha-hazo lavenona matevina voafantina anao sy ny hoditra microfiber avo lenta dia azonay atao ny manolotra seza fisakafoana amin'ny vidiny antonony sy kalitao. Vita amin'ny milina mandroso sy ny teknolojia vaovao, azonao ianteherana aminay ny fahombiazany sy ny kalitaony.
Seza fisakafoana ambony
Seza fisakafoanana tsotra sy malala-tanana izy io nefa tsy misy fanovana be loatra, izay 90 degre miaraka amin'ny ondana seza, misy tsirony. Ny loko dite dia iray amin'ireo loko malaza indrindra. Izy io dia mifanitsy amin'ny latabatra fisakafoana samihafa.
Seza fisakafoana misy sandry, izay hita matetika amin'ny tetikasan'ny injeniera, efitrano fianarana, trano fisakafoanana, efitrano fisakafoanana, sy sehatra maro hafa. Izy io dia manana loko isan-karazany azo isafidianana. Ny armrests dia tsy dia avo loatra, fa ny fihodinanan'ny lalana rehetra dia afaka mitazona tsara ny tananao, hanomezana anao fiononana fanampiny. Izy io dia misy ifandraisany amin'ny latabatra fisakafoanana samihafa.
Seza fisakafoana vita amin'ny hoditra sy lamba maoderina
Drafitra vaovao izy io, ny zavatra variana amin'ny endrika dia nanjary iray amin'ireo trano maoderina. Ao amin'ny rivotra minimalista dia misolo tena ny seza fisakafoanana maoderina.
Seza fisakafoanana amin'ny sandry.
Ny zoro rehetra dia natao ho an'ny fampiononana, miaraka amina fahaiza-miasa. Ny grayscale antonony ary mety indrindra amin'ny latabatra fisakafoana marbra fotsy. Miondrika eo afovoany ny andilana, manohana fotsiny ny hazondamosinao. Tsotra sy azo ampiharina izy io.
Seza fialam-boly fanaka maoderina
Sary famaritana Size (L * W * H)
Seza fialam-boly 760 * 1000 * 990mm Haavo ambony: 410mm
Style: Fomban'ny minimalism
Fitaovana: Lamba / Hodi-Microfiber / Hoditra tena izy
Sakafo fisakafoanana: Tongotra vy vy
Seza fialam-boly 770 * 840 * 770mm Haavo seza: 430mm
Seza fialam-boly 770 * 870 * 900mm
Haavo seza: 390mm
Fitaovana: Lamba / hoditra microfiber / hoditra tena izy
Seza fialam-boly 830 * 840 * 870mm
Haavo seza: 400mm
Sakafo fisakafoanana: Tongotra Stainless vy
Seza fisakafoana maoderina
Seza fisakafoana 670 * 630 * 750mm
Fitaovana: Vovoka mifoka, 304 titanium vy tsy misy tadiny
Seza fisakafoana 620 * 690 * 820mm
Fitaovana: Hoditra Microfiber & lamba
Seza fisakafoana 510 * 550 * 800mm
Fitaovana: Hoditra microfiber
Fitaovana: Kitapo hazo + lasely Premium
Sakafo fisakafoanana: Tongotra hazo matevina
Teo aloha: Fandriana